बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘लिलिबिली’ बाट सुन्दरी नायिका जसिता गुरुङको डेब्यू | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More...
‘साइँली’को ‘प्याट् प्याटे’ चप्पल (भिडियो)
‘दि म्यान फ्रम काठमाडौं’ मा कर्मासंग आनाको किचकिच
‘पुरानो बुलेट’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
चलचित्र ‘आप्पा’को नयाँ गीत सार्वजनिक
मलाइका र अरबाजको डिभोर्सको अघिल्लो रातको खोलिन् मलाइकाले रहस्य
´भैरव`को सिक्वेलमा निखिल सगै संचिता पनि देखिने
चलचित्र ’जानी नजानी’ को क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजानिक
चर्चित गायक सोनु निगम बिरामी भएर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना,आज डिस्चार्ज हुन सक्ने
द कपिल शर्मा शोबाट हटाइएका होइनन् विषेश कारणले छोडेको :नवजोज सिहं सिद्ध
गायक विनोद मेखुको गीत‘धन्यवाद’मा नायिका छुल्ठिम गुरुङ ( भिडियो)
Home >> Features >> बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘लिलिबिली’ बाट सुन्दरी नायिका जसिता गुरुङको डेब्यू
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘लिलिबिली’ बाट सुन्दरी नायिका जसिता गुरुङको डेब्यू
Posted by: namastefilmy April 9, 2018
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘लिलिबिली’ यहि चैत्र ३० बाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको ‘लिलिबिली’को अहिले ठुलै चर्चा हुने गरेको छ । बिशेष गरेर युवा स्टार नायक प्रदीप खड्का हुनु, देश विदेशमा छायांकन गरिनु लगायतका कारणले पनि यस चलचित्रको चर्चा हुने गरेको छ ।
यसै चलचित्र मार्फत फिल्मी नगरीमा सुन्दरी नायिका जसिता गुरुङले डेब्यू गर्दैछिन् । नपत्याउँदो पारामा जसिताका फ्यान हरेक दिन चौगुना भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा ब्यक्त प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने उनको फिल्म कहिले रिलिज हुन्छ र हलमा ओइरिने भनेर उनीहरु प्रतिक्षारत रहेको बुझ्न सकिन्छ । आखिर कसरी र किन बढिरहेका छन् जसिताका फ्यानहरु ? अनि उनीप्रति किन आकर्षित छ, फिल्म क्षेत्र ? हामी यही विषयमा केन्द्रीत हुने छौं ।
चलचित्र लिलीबिलीबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ‘इन्ट्री’ मारेकी नायिका हुन् जसिता गुरुङ । सलक्क मिलेको ज्यान । बोल्ने आँखा । गोरो छाला । समग्रमा पर्फेक्ट व्यक्तित्व । मानौं उनी फिल्ममा नायिका हुन नै जन्मिएकी हुन् ।
यी सुन्दरीलाइ नेपली सिनेमा क्षेत्रले भर्खरै पाएको हो । तर यूकेले भने उनलाई केही समयअघि नै पाएर कलाकारको रुपमा अनुमोदन गरिसकेको छ । सपन इन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेडले गरेको दोश्रो यू के डान्स अफमा १३ प्रतिष्पर्धीलाई उछिनेर जसिता विजेता बनेपछि उनको चर्चा समग्र युरोपमा भइरहेको छ । पोखराकी स्थायी बासिन्दा जसिता भूपू ब्रिटिश गोर्खा परिवारकी एक्ली छोरी हुन् । उनको बसाई बेलायतको विन्चेस्टरमा छ ।
लोकप्रिय अभिनेता प्रदीप खड्कासँग लिलीबिलीमा ‘स्क्रिन सेयर’ गरेपछि पनि जसिता धेरैकी प्रिय भएकि हुन सक्छिन् । जसिता र प्रदीपको ‘अन स्क्रीन रोमान्स’को झल्को बुझ्न लिलीबिलीको ‘ट्रेलर’ नै काफी छ । यसै फिल्मको ‘ट्रेलर’ र गीतले पनि प्रदीप र जसिताको रोमान्सलाई राम्रैसँग झल्काउँछ ।
गुडिया जस्तो फेस र बब्ली क्यारेकट उनलाई रुचाइनुको मुल कारण हो । प्राय नेपाली फिल्मले कैद गर्न नसकेका दृश्यहरू खिचेर छायाँकार सुदीप बरालले लिलीबिलीमा रोमांचकता थपेका छन् ।
निर्देशक मिलन चाम्स्को कमाण्डमा तयार भएको लिलीबिलीले दर्शकलाई कसरी बाँध्ने हो ? त्यसका लागि चैत्र ३० पर्खिनु पर्ला । तर, के कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ भने सुन्दरी अभिनेत्री जसिताको जादुले भने नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई आकर्षित गरिरहन सक्छ ।
Previous: द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी जेल बाट पाँच लाख धरौटीमा छुटे
Next: विपिन कार्की र नम्रता श्रेष्ठलाई लिएर दिनेश राउतले बनाउने भए ‘प्रसाद’
‘सुर्के थैली खै’को यूट्युवमा कीर्तिमान,करोड भन्दा बढी पटक हेरियो
चर्चामा कमल खत्रीको गीत ‘जाउँला रेलैमा,दश दिनमा पन्ध्र लाख बढी पटक हेरियो (भिडियो )
चलचित्र ‘डोली’को पोस्टर सार्वजनिक ,मंसिर २८ मा रिलिज हुने
माघ ४ गते बाट प्रदर्शन हुदैछ …
पुष २७ गते बाट प्रदर्शन हुदैछ …